Wararka - Cabbirka goynta weyn ee mashiinka goynta leysarka loo habeeyey ayaa lagu rakibay Singapore
Cabbirka weyn ee goynta mishiinka goynta leysarka ee lagu rakibay Singapore
Waa nooca caadada-dhamaadka sare, mashiinkan cabbirka goynta wax-ku-oolka ah waa
3000 * 12000 mm, qalabka mashiinka weyn ee ugu weyn warshadaha oo leh hal mar habka sameynta, xalka xirfadeed ee kala duwanaanta saxnaanta qalabka mashiinka baaxada weyn oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyin badan oo kala sooc ah oo kala sooc ah, macaamilku wuxuu ku qanacsan yahay xalalkeena laser iyo xirfadlaha ka dib adeegga iibka, go'aanso si aad uga iibsato mashiinka jarjarada leysarka quwadda korantada sare leh 15000W marka xigta SUNTOP.
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, waxaa la soo gabagabeeyay Kalfadhigii Shanaad ee Golaha 19aad ee Golaha Dhexe. Fadhiga guud wuxuu sameeyay qorshe dhameystiran oo ku saabsan horumarka Shiinaha inta lagu gudajiray "qorshihii shanaad ee shanaad ee 14aad", wuxuuna sharaxay hadafka fog ee 2035. Tani waxay muujineysaa in, laga bilaabo sanadka soo socda, Shiinaha uu galayo marxalad cusub oo horumarineed, iyo tan cusub fikradda horumarinta waa la sii dhaqangelin doonaa, iyo qaab cusub oo horumarineed oo leh wareeg ballaaran oo gudaha ah sida jirka ugu weyn iyo wareegga gudaha iyo caalamiga ah ee isu fidinaya midba midka kale waa in la dhiso.
Marxaladda horumarineed ee cusub, fikradda horumarinta cusub iyo qaabka horumarka cusub, furitaanka ayaa had iyo jeer door muhiim ah ka ciyaara. Kulankii seddexaad ee soo-dhoofinta caalamiga ah ee Shiinaha ayaa la qabtay kadib Kal-fadhigii Shanaad ee 19-kii Golaha Dhexe ee Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha. Waxay sii waday inay ku dhawaaqdo dhismaha jaran cusub oo furitaan ah, dhiirrigelinta horumarka hal-abuurka ah ee ganacsiga ajaanibta, si joogto ah u wanaajiso jawiga ganacsiga, iyo sii xoojinta iskaashiga labada dhinac, dhinacyada badan iyo gobolka. Afartaan tallaabo ee cusub ayaa ah kuwa ugu hooseeya ee tilmaamaha muujinta furitaanka heerka sare ee Kal-fadhigii Shanaad ee Golaha 19aad ee Golaha Dhexe.
"Albaabka furitaanku waxa kaliya oo u furmi doonaa waasac iyo ka ballaadhan" waa ballanqaad aan ruxnayn oo Shiinaha ah. Soo-jeedinta joogtada ah ee tallaabooyinka furitaanka waxay muujineysaa in furitaanka Shiinaha uu si dhow isugu xiran yahay isla markaana uu si joogto ah u sii socdo. Adduunku wuu arki karaa kalsoonida, go'aan qaadashada iyo adkeysiga furitaanka joogtada ah ee Shiinaha.
Shiinuhu wuxuu si aan leexleexasho lahayn u ballaarin doonaa furitaankiisa dhinac walba, si suuqa Shiinaha uu u noqdo suuq caalami ah, suuq la wadaago iyo suuq qof walba loo helo, isla markaana loogu daro bulshada caalamka tamar aad u wanaagsan. Ereyada Madaxweyne Xi Jinping waxay adduunka u sheegeen in "furitaanka" ay tahay aasaas lama huraan ah. Waa si sax ah maxaa yeelay waxaa jira tobanaan kun oo sooyaal “furan” oo adduunka ah. Ku tiirsanaa iskaashiga iyo wada shaqeynta, khariidada dhaqaalaha adduunka waxay soo bandhigeysaa dhinac qani ah oo midab leh. Hooska khariidada dhaqaalaha adduunka, Shiinaha wuxuu si isdaba joog ah ugu dhawaaqay tallaabooyinka furitaanka wuxuuna soo jeediyay in dhammaan waddamadu ay wada shaqeeyaan si kor loogu qaado furitaanka guud ee iskaashiga guul-wadaagga, iskaashiga iyo wada-noolaanshaha, taas oo sharraxaysa xulashada Shiinaha. oo ah "taagan dhinaca midig ee taariikhda", taas oo tusaale u noqonaysa waddamada oo dhan in ay si wada jir ah u furaan uguna daraan midab dhalaalaya khariidadda dhaqaalaha adduunka.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Fiber Laser, Mashiinka Goynta Laser Fiber, Tuujiye Laser, Shiinaha Fiber Laser Goynta Machine, Pipe Fiber Laser magaabay, Mashiinka Goynta Tube Fiber,